FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHEPRADOR ALEMANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Sheprador alemanina
Alika mpiandry ondry / Labrador misambotra alika mifangaro
' Io no Magicien. Ny reniny dia Lab mavo ary ray mpiandry ondry alemanina. Tiako ho hitan'ny rehetra ny hatsarany! Alika tsara indrindra mandrakizay. Efa ho 6 taona izy. Wizard dia nampiofana mora foana ary mahalala didy 40 mahery. Alika mpiambina lehibe. Tsara miaraka amin'ny biby. Afaka mitsambikina sy manadio tongotra 6 izy. '
Ny alemanina Sheprador dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpiandry Alemanina ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
IDCR = Fisoratana anarana amin'ny Canine
Bailey ilay 3/4 Labrador Retriever / 1/4 mpiandry mpiandry Alemanina mifangaro amin'ny 9 1/2 taona. Ny rainy dia Lab mainty ary ny reniny dia antsasaky ny antsasaky ny Shepherd mpiandry Alemanina.
Charlie the German Sheprador amin'ny 4 taona (mixer German Shepherd / Labrador Retriever)
Taz ilay Sheprador Alemanina 10 taona— 'Taz dia mpiangona mpiandry ondry alemanina / mavo. Mandeha balistik amin'ny lanezy sy ny rano izy. Hampiseho ny filalaovan'ny laboratoara ary ny fahalalan'ny mpiandry , ary tena mahay manandrana mitsoaka lavitra mandeha irery . Izy dia iray amin'ireo alika tsara indrindra nananantsika ary tsara tarehy izy! Tafiditra amin'ny programa antsoina hoe Freedom Tails aho. Izaho no tonian-dahatsoratra sy mpaka sary ho an'ny gazety hatramin'ny 2009, miaraka amin'ireo lafiny rehetra amin'ilay programa. Na dia lasa AKC Good Citizen Evaluator tamin'ny herintaona aza. Ny fandaharana dia miorina ao amin'ny Stafford Creek Corrections Center, tranomaizina lehilahy misy olona 2000 eo ho eo, any Aberdeen, WA. Mitondra alika fialofana isika izay mety hafanaina amin'ny fomba hafa, miverina mianatra azy ireo amin'ny fahaiza-manao ara-tsosialy sy baiko fototra, ary mamerina azy ireo hiverina amin'ny fiaraha-monina. Amin'izao fotoana izao dia nahita trano vaovao feno fitiavana sy mandrakizay izahay ho an'ny alika 250 mahery. '
Taz ilay Sheprador alemanina toy ny alika kely
'Ity i Roy, antsika Lab mavo / Mpiandry Alemanina amin'ny 6 taona. Nanana azy isika hatramin'ny herintaona teo ho eo. Sariaka be izy ary be fitiavana. Na izany aza, ny fitambaran'ireo karazany roa ireo dia nanjary nandatsaka be loatra. Saika tsy ampy ny miborosy isan'andro! Saingy mankafy ny minitra tsirairay avy amin'ny sainy izy rehefa voakarakara. Tsara fanahy izy, mitazona farafaharatsiny farafaharatsiny filalaovana ao an-trano, fa manao toy ny alika kely indray mandeha rehefa mivoaka any ivelany. '
'Dakota no afangaro mpiandry alemana mpiandry ondry / Labrador Retriever 1 taona ahy. Mampiofana amin'ny fitsambikinana dock, hakingana ary fankatoavana izy, ary mahatalanjona! Izy dia mpiara-miasa tsara, alika mpiambina tsara ary namana akaiky. Te-hanao zavatra foana izy ary azo antoka fa tsy karazan'alika ho an'ny olona tsy manam-paharetana. Matetika izahay no miasa miaraka amin'ilay tsato-kazo manadala, ary hanenjika azy mandritra ny ora maro izy io. '
'Ity misy sarin'ny fifangaroan'ny Mpiandry Alemanina / Labrador Alemanay 8 volana izay noraisinay avy tamin'ny toeram-pialokalofan'ny biby teo an-toerana. Ny andro voalohany niaraka taminy dia tena traikefa nahafinaritra. Indray mandeha monja dia niondrika niondrika kely isan'alina izy (angamba avy any amin'ny lamasinina tsy henoko, fa afaka). Ankafiziny ny azy mandeha isan'andro ary manao asa tsara! '
'Blaze dia Lab mainty / Mpiandry Alemanina. 8 volana izy, tia ankizy ary alika hafa. Ankafiziny ny azy fihazakazahana isan'andro ary izay any ivelany. '
'Ity no alika natsangako Sam. Izy dia Mpiandry Alemanina / Lab mainty mifangaro. Tsy hita ny tongony havia eo anoloana. Nahita an'i Sam namonjy famonjena aho fony izy folo volana ary fitiavana no nilelaka voalohany! Niaraka taminay nandritra ny roa taona sy tapany izy izao ary natory teo am-pandriako isan-kariva - zazalahy mammà tokoa izy. Sam dia milomano, milalao tenisy, basikety ary soccer. Mihazakazaka toy ny rivotra izy! Sady simba i Sam ary satria mpitsabo mpanotra aho, dia manotra amin'ny alim-pandriana isan-kariva. Tena marani-tsaina, miaro, be fitiavana, be fandavan-tena, manam-paharetana, mankatoa. Izy no alika tonga lafatra sy fitahiana azo amin'ny fiainako. Izy no vady fanahiko. '
Mitch the Labrador Retriever / Alemanina Mpiandry ondry mifangaro amin'ny 8 taona
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Sheprador Alemanina
Sary Sheprador Alemanina 1
Sary Sheprador Alemanina 2
Sary Sheprador Alemanina 3
Lisitry ny karazana alika mpiandry
Lisitry ny alika miteny mainty
fifangaroan'ny omby heeler manga
Retriever volamena 5 volana
Zavatra shorthaired manondro aty loko
alika omby aostraliana miloko tri